Qasacadeysan galley macaan
Makiinado wax lagu shaabadeeyo
Xalka Khadka Waxsoosaarka oo Dhan
Cuntada la qaboojiyey
Tababbarka Cudur-ka-dilista Ka-hortagga Cunnada
1. Ujeeddooyinka tababarka Iyadoo loo marayo tababarka, hagaajinta aragtida nadiifinta iyo heerka hawlgalka ficil ahaaneed ee ardayda, xallinta dhibaatooyinka adag ee soo food saaray geeddi-socodka qalabka isticmaalka iyo dayactirka qalabka, dhiirrigelinta hawlgallada jaango'an, iyo horumarinta cilmiga iyo badbaadada cuntada t ...Akhri wax dheeraad ah »
Fresh, Nafaqada, Safty, noocan ah cuntada qasacadaysan waa inay ahaato waxaad rabto!
Cuntada qasacadaysan waa mid aad u macaan Sababta ugu weyn ee dadka badankood ay uga tagaan cuntada qasacadaysan ayaa ah iyaga oo u maleynaya in cuntada qasacadaysan aysan aheyn mid cusub. Cunsuriyadani waxay salka ku haysaa fikradaha macmiisha ee ku saabsan cuntada qasacadaysan, taas oo ka dhigaysa inay la mid noqdaan cimri dherer iyo caajis. Si kastaba ha noqotee, cuntada qasacadaysan ayaa ah mid muddo dheer soconaya ...Akhri wax dheeraad ah »
Aragtidaada, ma jirtaa xirmo qasacadaysan oo cusub oo "kaa nixisay"?
Waqtiga sii kordhaya, dadku waxay si tartiib tartiib ah u aqoonsadeen tayada cuntada qasacadaysan, iyo baahida loo qabo in kor loo qaado isticmaalka iyo jiilalka soo koraya ayaa midba midka kale u raacay. Tusaale u soo qaado hilibka qadada ee qasacadaysan, macaamiisha uma baahna oo kaliya dhadhan fiican laakiin sidoo kale xirmo soo jiidasho leh oo shaqsi ahaan loogu talagalay. ...Akhri wax dheeraad ah »